Ronaldo Neymar iyo Messi midkasta lacgta ka soo gasha Posti kasta oo uu dhigo barta Instagram? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Ronaldo Neymar iyo Messi midkasta lacgta ka soo gasha Posti kasta oo uu dhigo barta Instagram?
(31-10-2018) Cayaaryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lacadeeyey in uu Noqdey dhaqsiga ugu Saaxiibada badan dhamaan dadka isticmaala barta bulshada ee Instagram bartaas oo ah mid ay isticmaalaan Malaayiin qof oo Caalamka ku kala nool.
Cristiano Ronaldo ayaa dhawaan kala wareegay shaqsiga ugu Saaxiibada badan barta Instagram gabdha lagu Magacaabo Selene Gomez waxaana uu yeeshay 144,3 million followers isaga ayaana ah xiligaan kan ugu badan Caalamka oo dhan.
Hadaba waxaa jira in ay Cayaartoy kale isticmaalaan bartaan Instagram oo laga helo lacag aad u fara badan hadii aad hesho Saaxiibo badan oo aqriya Postiyada aad dhigto waxaana lacadeeyey in Ronaldo ay ka soo gasho lacag aad u farabadan.
Xiddigaha Lionel Messi iyo Neymar ayaa ah kuwa ku soo xiga Ronaldo ee aad loo aqriyo waxyaabaha ay soo dhigaan bartooda waxaana Messi halkii Port ka soo gasha lacag dhan (€430K). Neymar waxaa ka soo gasha €515K) halka Cristiano Ronaldo uu ka helo halkii Post lacag dhan €650K waana ugu badan ee ay lacagi ka soo gasho barta Instagram.